nepaldoor.com: डाक्टरको स्थलगत अनुभव: मुगुका मानिस भगवान्–भरोसामा बाँचेका छन्
डाक्टरको स्थलगत अनुभव: मुगुका मानिस भगवान्–भरोसामा बाँचेका छन्
डा. प्रशान्त कँडेल
डा. प्रशान्त कँडेल कर्णालीस्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका मेडिकल अधिकृत हुन् । बंगलादेशबाट तीन वर्षअघि एमबिबिएस उत्तीर्ण गरेका उनी दुई वर्ष वीर अस्पताललगायत राजधानीका अस्पतालमा काम गरेपछि कर्णाली पुगेका हुन् । डा. कँडेलले कर्णालीको स्वास्थ्यबारे यस्तो धारणा राखे :
बंगलादेशबाट एमबिबिएस पढेर फर्केपछि दुई वर्ष मैले काठमाडौंको वीर अस्पताललगायतमा काम गरेँ । त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कर्णाली पठायो । एक वर्षदेखि उतै छु । यसबीच मैले मुगुमा आठ महिना बसेर सेवा गरेँ । मुगुको विकटताबारे सुनेको थिएँ, अहिले प्रत्यक्ष अनुभव गरेर फर्केको छु ।
०७० साउन २४ गते म जुम्लाबाट मुगुमा खटिएँ । एकजना गर्भवती महिलालाई अत्यधिक रक्तश्राव भएछ । उनको उपचार र अन्य बिरामीको चेकजाँच गर्न मलाई खटाइएको थियो । जुम्लाबाट ६ जना प्रहरीका साथ लागेर दुई दिनको पैदल हिँडी म मुगु सदरमुकाम गमबढी पुगेँ ।
म दुई दिनपछि पुग्दा गर्भवती महिला निको भइसकेकी रहिछन् । त्यहाँका अहेवले सोधपुछ गरेर औषधि चलाएछन्, मैले खासै उपचार गर्नुपरेन । म अन्य बिरामीको उपचारमा संलग्न भएँ । म जाँदा प्रमुख जिल्ला जनस्वास्थ्य अधिकृत थिएनन् । एमबिबिएस डाक्टर पनि त्यतातिर जाँदा रहेनछन् । केवल अहेवको भरमा अस्पताल चलेको रहेछ ।
म गमबढी पुग्दा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा हल्लीखल्ली भएछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुगमनका लागि टोली आउँदै छ भनेर सबैजना सतर्क भएका रहेछन् । तर, मलाई सरकारले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि पठाएको थियो । १५ दिनसम्म कर्मचारीले मलाई टेरे । तर, मेरो म्याद थपिएपछि उनीहरूलाई लागेछ, यो पनि हामीजस्तै जागिर खान आएको हो । त्यसपछि मलाई टेर्न छोडे । झर्केर बोल्न थाले ।
कात्तिक दोस्रो साता धैनकोट र भिई गाविसमा महामारी फैलिएको खबर आयो । सदरमुकामबाट धैनकोट दुई दिन र भिई तीन दिनको पैदल बाटोमा पर्छ । सुरूमा अहेवको नेतृत्वमा हामीले रेस्पोन्स टिम र दुवै गाविसका लागि एक/एक बोरा औषधि पठायौँ । अहेव टोलीले ठूलो घटना केही भएको छैन भन्ने रिपोर्ट ल्यायो ।
केही समयपछि मिडियामा ठूलै समाचार आयो । मेरो नेतृत्वमा चारजनाको टोली मंसिर पहिलो साता दुवै गाविसतर्फ लाग्यो । पहिले भिई गयौँ । तीन दिनको उकालो–ओरालो हिँडेर पुग्यौँ । ठाउँ रमणीय रहेछ । पहाडको टुप्पामा बस्ती, छेउमा कर्णाली बगिरहेको । धान र मूला मात्र फल्दो रहेछ । अरू तरकारी केही नहुने ।
त्यहाँका मानिस बिरामी थिए । अहेव थिएनन् । अहेव महिना, दुई महिनामा एकपटक आउने, दुई दिन बसेर हाजिर बजाउने र गमबढी फर्किने गर्दा रहेछन् । अहेवको अनुगमन गर्ने चलन रहेनछ ।
हामी पुग्दा भिईमा अहेव थिएनन् । तीन दिन बसेर जनताको उपचार गर्‍यौँँ । अहेव आएनन् । हामीले स्थानीयको रोहवरमा अहेव अनुपस्थित रहेको भनेर सहीछाप गर्‍यौँ र कारबाहीका लागि सिफारिस गर्‍यौँ । हामी भिई पुग्दा जनता खुसी भए, सँगै आक्रोशित पनि । हामीलाई अप्ठेरो पर्दा मात्र आउने, अरू वेला वास्तै नगर्ने भन्दै गाली गरे । उनीहरूको आक्रोश जायज थियो । अहेवहरू काज मिलाएर सदरमुकाम बस्दा रहेछन् । पटक–पटक कसरी काज मिल्छ सदरमुकाममा ? मैले बुझ्न सकिनँ ।
एकपटक भिई गाउँमा बालबालिका बिरामी परेछन् । अहेव रहेनछन् । स्थानीय जनताले हेल्थ पोस्टको ढोका फोरेर औषधि निकालेछन् । त्यो सुनेर म चकित परेँ ।
धैनकोट भिईभन्दा ठूलो रहेछ । धैनकोट र भिई बाजुरासँग जोडिएका गाविस हुन् । धैनकोटमा हामीले स्थानीयबाट स्वागत पायौँ । उनीहरूको बुझाइ थियो, हामी सरकारले पठाएर आएका हौँ, आफैँ आएका होइनौँ ।
सदरमुकामबाट दुई दिनको बाटोमा सोरू गाउँ पर्छ । गत फागुनमा त्यहाँ कांग्रेस समर्थकको मृत्यु भएको रहेछ । कांग्रेसका प्रतिनिधिहरू सदरमुकाम आएर मसँग भने, ‘पोस्टमार्टमका लागि गाउँ गइदिनुपर्‍यो ।’ मलाई अचम्म लाग्यो । ‘गाउँमै गएर पोस्टमार्टम गर्ने ?,’ मैले सोधेँ, ‘त्यसो गर्न मिल्दैन । लास अस्पतालमै ल्याउनु’स् ।’ यही विषयमा कांग्रेसका मान्छेसँग करिब एक घन्टा विवाद चल्यो । मैले उनीहरूको ढिपी मान्ने कुरै थिएन । उनीहरू फर्किए ।
भोलिपल्ट बिहानै प्रमुख जिल्ला अधिकारी बलभद्र गिरीले फोन गरेर भन्नुभयो, ‘तपाईँ गइदिनुपर्‍यो ।’ डिएसपी र सिडिओलाई एकै ठाउँमा राखेर कांग्रेसका मान्छेले दबाब दिएछन् ।’ मैले सिडिओसँग गाउँमै गएर पोस्टमार्टम गर्न मिल्दैन भनेको थिएँ ।
कांग्रेसका मान्छे पुन: अस्पताल आएर जिद्दी गर्न थाले । उनीहरूले भने, ‘अन्तिमपटक गइदिनु’स् । अबदेखि अस्पतालमै ल्याउनुपर्छ भनेर सर्वदलीय बैठक बोलाएर निर्णय गराउँछौँ ।’ पछि पो बुझेँ, मुगुमा लासमाथि पनि राजनीति हुने रहेछ । सदरमुकामबाट पोस्टमार्टम गर्न डाक्टरलाई घरै ल्याएँ भनेर गाउँका ठूलाबडाले फुइँ लडाउँदा रहेछन् र उनीहरूको क्षमता देखेर सर्वसाधारण मख्ख पर्दा रहेछन् ।
जाँदै जान्नँ भनेर अड्डी कसिरहेँ । तर, केही लागेन । अबदेखि पोस्टमार्टमका लागि अस्पतालमै ल्याउने भन्ने उनीहरूले कागज गरेपछि जान तयार भएँ । दुई दिन हिँडेरै गई पोस्टमार्टम गरिदिएँ ।
सरकारले मुगुमा औषधि पठाएको छ । जनशक्तिको पनि व्यवस्था गरेको छ । तर, जनशक्ति र औषधि दुवै गाउँसम्म नपुगेपछि के गर्ने ? सबै चीजको व्यवस्था भएर पनि त्यहाँका जनता सामान्य उपचारबाट पनि वञ्चित छन् । मुगुका २४ गाविसमध्ये दुई गाविसमा अहेव बस्छन्, २२ गाविसमा बस्दैनन् । सामान्य ज्वरोको पनि उपचार हुँदैन । सिटामोल खान नपाएर मानिस मरिरहेका छन् । मुगुका मानिस भगवान्–भरोसामा बाँचेका छन् ।
मुगुमा मुटुका बिरामी धेरै छन् । सुर्ती, बिँडीबाट उत्पन्न हुने रोगबाट पीडितको संख्या पनि उल्लेख्य छ । त्यहाँका मानिस चुरोट, बिँडी आदि सेवन गर्छन् । त्यहाँका बच्चालाई पनि टिबी रोग लाग्दो रहेछ । मैले सात वर्षको बच्चामा पनि टिबी भेटेँ । तीनजना बच्चालाई टिबीको औषधि चलाएँ । प्रेसरका रोगी पनि टन्नै छन् ।
चार दिन पैदल हिँडेर ज्वरोका बिरामी उपचार गराउन गमबढीसम्म आउने गर्छन् । हुम्लाबाट पनि धेरै बिरामी आउँछन् । मैले बुझेसम्म मुगुभन्दा हुम्लामा बढी समस्या छ । हातखुट्टा भाँच्चिएका, चोटपटक लागेकाहरू टाढा–टाढाबाट गमबढी आउँछन् । मैले हातखुट्टा भाँच्चिएका मान्छेहरूको बिजोग देखेको छु । भित्र हड्डी भाँच्चिएको हुन्छ, अस्पताल आइपुग्दा भाँच्चिएको भागको बाहिरी छाला कुहिसकेको हुन्छ ।
मुगु अस्पतालको बेथिति बताई साध्य छैन । कर्मचारी नियमित रूपमा आउँदैनन्, कार्यालय समयसम्म बस्दैनन् । इमर्जेन्सीमा काम गर्ने एचए, अहेव पनि बस्दैनन् । सिडिओलाई भनेर एक/दुईपटक छड्के निरीक्षण गराएँ, तर ट्रयाकमा ल्याउन नसकिने रहेछ । अनुगमन नहुँदा कर्मचारीहरू कामै गर्दैनन् ।
चार महिनाअघि जिल्लामा कुन रोगका बिरामी कति रहेछन् भन्ने तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने थियो । मेरो छेउमा, सदरमुकाममै बसेर कर्मचारीले अन्दाजको भरमा डाटा भरिरहेका थिए । वास्तवमा जथाभाबी डाटा बनाएर सरकारी रकम दुरुपयोग भइरहेको छ । मुगुमा यस्तो लुट छ कि राज्य छ/छैन मैले नै भेउ पाउन सकिनँ ।
मुगुको जिल्ला अस्पताल आफैँ रोगी छ । पुरानो मेसिन छ, छातीको एक्सरे हुँदैन । प्लेट सकिएको महिनौँ भयो, ल्याइएको छैन । बच्चाहरूको सामान्य एक्सरे मात्र हुन्छ । व्यवस्थित ल्याब छैन । रगत र पिसाबको सामान्य जाँच हुन्छ । ल्याब अस्पतालको मेरुदण्ड हो । अनुमानका भरमा जाँच्ने, औषधि दिने काम हुन्छ ।
मुगु अस्पताल १५ बेडको छ । त्यति बेडमा एकपटक मैले २५ जना बिरामी भर्ना गरेँ । १० जनालाई भुइँमै सुताउनुपर्‍यो । ब्लड बैंक छैन । रगत चाहियो भने प्रहरी, सशस्त्र, सेनाकहाँँ कुद्नुपर्छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुगमन व्यवस्था त्यहाँ अत्यन्तै फितलो छ । म आठ महिना बस्दा एकपटक पनि अनुगमन भएन । एकपटक महालेखा परीक्षकको टोली पुगेको थियो, तर उसले के गर्‍यो थाहा भएन । कार्यालय–प्रमुख, लेखापाल महिनामा एकपटक पुग्छन् । कहिलेकाहीँ दुई महिनामा पुग्छन् । कसैले सोधखोज गर्दैन । जिल्ला अस्पताल विकास समितिले उठाएको पैसाको दुरुपयोग भएको छ । रक्सी र मासुमा पैसा उडाउने काम भइरहेको छ ।
डेढ/दुई वर्षदेखि मुगुका गाउँमा नियमित खोप पुगेको छैन । यसपालि पोलियो खोप पुग्यो । बाँकी खोप सदरमुकामबाहिर पुगेको छैन । डेढ वर्षदेखि खोप लगाउन नपाएका बच्चाहरूको अवस्थाबारे कसैलाई मतलब छैन । सरकारले खोप नपठाएको होइन । तर, खोप बोकेर लैजानेले बाटैमा फालिदिँदा रहेछन् । लेखापालदेखि हाकिमसम्मले खोप बोकेर लानेहरूको भत्ता खाँदा रहेछन् । तर, खोपचाहिँ पुग्दैन रहेछ । यो सबैले बुझेका छन्, तर कारबाही हुँदैन । सिडिओले पनि केही गर्न सक्दा रहेनछन् ।
कर्णालीका जनतालाई सरकारले र एनजिओहरूले धेरै लगानी गरेका छन् । शिक्षामा धेरै पैसा खर्च भएको छ । मुगुमा मात्र तीन सय ६५ वटा एनजिओ दर्ता छन् । ६०/७० वटा चलिरहेका छन् । कतिपय एनजिओले राम्रै काम पनि गरेका छन् । तर, एनजिओमार्फत पैसा भित्र्याउनेले जम्मै आफैँ हजम गर्दा रहेछन् । त्यहाँका मानिसको सोच नै पिछडिएको छ । बाहिरी दुनियाँसँग कसरी सहकार्य गर्ने, चेतनाका हिसाबले कसरी माथि उठ्ने भन्ने सोच कसैमा छैन ।
प्रस्तुति: पर्शुराम काफ्ले @ NAYAPATRIKA, JETH 14, 2071
Unknown7November 2014 at 07:17